शिक्षक लाईसेन्सकाे फारम भरेकाले कसरी पाउने प्रवेश पत्र? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले पहिलोपटक अनलाइनबाट फारम भर्ने गरी खुलाएको शिक्षक लाइसेन्सको विज्ञापनको परीक्षाका लागि प्रवेशपत्र पनि अनलाइनबाटै वितरण गर्ने भएको छ । आयोगले अनलाइनबाटै परीक्षार्थीले आफै प्रवेशपत्र निकाल्न मिल्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
परीक्षार्थीले अनलाइनबाटै भरेको विवरण ठीक भएनभएको निक्र्योल गर्ने र अनलाइनबाटै प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्न दिने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका प्रशासकीय प्रमूख डा. तुलसी थपलियाले जानकारी दिए । अब केही दिनमै विवरण हेर्न दिन आयोगको तयारी रहेको डा. थपलियाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २ लाख ५० हजार बढीले लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी निमावि तहको नेपाली विषयका लागि ५० हजार बढी आवेदन परेको छ । यस्तै कानून, इञ्जिनियरिङलगायतका प्राविधिक विषयमा सबैभन्दा कम आवेदन परेको डा. थपलियाले जानकारी दिए । एजुकेशन पाटीबाट साभार
ट्याग्स: शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षक सेवा आयोग